दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न सरकारलाई विपक्षी गठवन्धनको चेतावनी - शैली न्युज
दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न सरकारलाई विपक्षी गठवन्धनको चेतावनी
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:३६
काठमाडौं । विपक्षी गठवन्धनले सरकारलाई दिर्घकालिन असर पर्ने कुनै काम नगर्न । चेतावनी दिएको छ । बुढानीलकण्ठमा आज बसेको विपक्षी ५ दलको बैठकले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कामकारबाही नगर्न चेतावनी दिँदै वैठकपछि विज्ञप्ती निकालेर चेतावनी दिएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकपछि सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा वैकल्पिक सरकार दाबी गरिएको अवस्था रहेकोले अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन कामकारबाही गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।
उनीहरूले सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुने पनि विश्वास उनीहरूले लिएका छन् । संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।
गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको समेत आरोप लगाएको छ । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन परिस्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम गर्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ ।
देउवा निवसको छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले माधव नेपाल समूह तथा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी गिए । उक्त छलफलमा कांग्रेका सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता कृष्णबहादुर महरा, एमाले नेता माधव नेपाल, भीम रावल तथा जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादवलगायत सहभागी थिए ।
किन सोधियो सुदूरपश्चिममा ओली पक्षका सांसद बोहोरालाई स्पष्टीकरण ?
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी, न्यायाधीश श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएकोमा प्रश्न